सरकारसँग शान्ति समाजको आग्रह- ‘डा. केसीसँग संवाद गर्नु’ - Korona Khabar
सरकारसँग शान्ति समाजको आग्रह- ‘डा. केसीसँग संवाद गर्नु’
११ आश्विन २०७७, आईतवार १४:३८
काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीसँग शीघ्र संवाद गरी सहमति खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आइतबार (आज) समाजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘एक निष्ठावान् सत्याग्रहीप्रति सम्मान प्रकट गर्दै संवादमार्फत् शीघ्र सहमति खोज्न र संवेदनशील बन्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’
समाजले सत्याग्रहका क्रममा डाक्टर केसीप्रति सरकारले गरेको व्यवहार निन्दनीय भएको टिप्पणीसमेत गरेको छ । यसअघि पनि विभिन्न नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थाहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीसँग वार्ता गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।